Maitiro ekuita ne coronavirus (kuvhara) matanho: matipi anoshanda: Martin Vrijland
Maitiro ekuita ne coronavirus (kuvhara) matanho: matipi anoshanda
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 18 March 2020	• 18 Comments
Mazuva mashoma apfuura ini ndakazadzwa nemibvunzo nezvekubuda kwe coronavirus. Chii chandinofanira kuita? Ndoita sei nematanho ese? Ndezvipi zvigadziro zvandinoita kuti zvese zvinouya? Ndine nhau dzakanaka. Nhau dzakanaka ndedzekuti zviri pachena kuti vanhu vazhinji nekuwedzera vanonzwisisa kuti vari kuridzwa nehuwandu hwehurombo. Mubhuku rangu ndinodaidza izvi 'hutachiona hwakakura hunotichengeta muchokwadi chenhema'.
Chokwadi ichocho sezvatinoona icho chakanyanya kusarudzwa nevezvenhau nezvematongerwo enyika. Vazhinji vanhu vazhinji vari kutanga kuona izvo.
Ehe zvinoita sekunge hazvigone kunyatsoita hutachiona kubuda, asi chinyorwa chayo Chiitiko 201 coronavirus kurovedza yakanga yatove iripo uye kubuda kweCovid-19 kwakatoratidzwa mumepu dzakanaka dzepamberi pasati paine bvunzo yepamutemo pamusika. Zvinoratidzika kunge zvisingaite kufa kwekunyepera kana utachiona hwenhema. Kana kuti zvinogoneka? Uye kana zvirizvo, sei gehena vaizozviita?
Saka ngatimbofungai kuti hutachiona huripo zvechokwadi. Isu hatisati tave nechokwadi kuti yakabva nechisikigo here kana kuti zvimwe yakagadzirwa muabara uye netsaona yakapukunyuka kana kupararira kunge bio-chombo. Ngatifungei sarudzo ye bio-chombo (kungoedza kwekufunga). Dai kwaive nehurumende kana boka rekutyisidzira rakadai raiita izvi, hawaimboziva, nekuti harigone kudzikwa kumashure. Zvese zvatinoziva ndezvekuti Bill Gates akati kumashure muna 2017 kuti dambudziko rinotevera rinogona kungouya kubva pachikomputa screen (ona pano).
Isu tinoona huwandu husinga tsanangurike hwezvirwere (angori zviuru zvishoma kubva kumazana emamirioni), asi chirevo ichi ndechekuti kune kukura kwakawedzera kumashure kwekoronavirus uye kuti kunyangwe huwandu hwakaderera hwehutachiona pakutanga, mavhiki mashoma anotevera anova asingadzoreki. Kana izvo zvinogara zvichidanwa, nzira yeDutch yekupinda yakadzora umo makumi matanhatu muzana yevagari vanofanira kutapukirwa kuti vagadzire hutachiona hwekudzivirira moto zvinoshamisa. Mark Rutte akadana iro boka kusadzivirira.
Saka zvaunoziva pane imwe nguva kusvika pakuputika kusingadzoreki kuchakubvumidza iwe kunonoka kupararira kwehutachiona uye usawana iyo exponential factor? Ivo vanoshandisawo nzira iyi kuUnited Kingdom. Dzimwe nyika dzirikuenda kunovharira zvachose. Zvinoratidzika kuti iyi isina-yunifomu nzira ichave chikonzero chekuuya nenzira isinga fungidzike pamwero wepasi rose. Isu tatoona kudanwa uku kwehurumende yenyika yose maererano nemamiriro ekunze.
Chero munhu akaverenga bhuku rangu anogona kunge akazoona kuti kana iwe uine zvematongerwo enyika uye midhiya muhomwe yako uye zvakare uine yakakura network vashandi vanovhiringidzika munharaunda (iyo inokupa iwe mari yevimbiso), zvakanaka kuitisa. Muyo yaimbove GDR, maererano nevemutemo nhamba, 1 muvanhu makumi mairi aive akadaro Inoffizielle Mitarbeiter. Hatigone kutsoropodza mukana wekuti hurumende dzikwanise kupopota zvinhu, vachishandisa nzira dzekuparadzira dzakabatana nevatori venhau uye vanhu vari kuwana mari yakawedzerwa. Chatinongogumisa ndechekuti hurumende dzaida dambudziko iri.
Yakanga yoda kusvika. Ndakanyora nguva refu dambudziko iri risati ratanga ichi chinyorwa mukati mandakataura kuti capitalism ndiyo yaive smart roadmap yakananga kuCommunism. Izvi zvinodaro nekuti mabhengi epakati aive adhindisa gomo rakakura kudaro remari zvekuti chikwereti cheblue (iyo 'zvinhu zvese') chakazove chisingagoneke. Nemari yakadhindwa iyoyo, mari yaikweretwa kune-isina-mimhanzi yamarudzi akawanda kungangoita zero zero. Pashure pacho, mahombekombe epakati akatengazve zvikwereti izvo (zvisungo). Makambani makuru saka akapihwa mari hombe kuti atenge vanokwikwidza vakwidziridze uye kuti vawedzere mutengo wemugove wavo (nekutenga iwoawo masheya).
Mitengo yemasheya yakaramba yakakwira zvekumusoro, izvo zvaiita kunge zviri kufamba zvakanaka mune zvehupfumi. Zvinotonyanya kukosha, zvakadaro, ndezvekuti makambani aya anogona kukura nekukura, nepo iwo makambani asina rombo akawira pamusoro (nekuti havana kuwana mari yemahara). Nekukanganisa hupfumi, hurumende dzinogona kutenga nekutenga makambani iwayo. Uye nekukurumidza iwe pachako unozviwana mune izvo zvatinodaidzira kuti chikominisi.
Chinhu chekupedzisira chaunoda muhurumende yemakominiti ndevamabhizinesi vakazvimirira. Iwe unoda kuti munhu wese ave nemari yekutanga uye mutambe zvakanakira kune yakatarwa mitemo yenyika. Ndeipi iyo dunhu reDutch (semuenzaniso) rakawana mune imwe yakawa swoop mumazuva achangopfuura? Wese munhu ari pamba uye achinyatsovimba nerutsigiro rwenyika. Makumi emabhiriyoni anongoerekana aripo kuti ape munhu wese mari yekutanga. Iwe unofunga zvechikominisi? Izvi zvinoita sekunge ndizvo zvakanaka zvecommunism iyoyo. Pfungwa yemakominisiti ndeyakanaka kwazvo.
Iyo nyika inogona ikozvino kuona ese mativi echikominisi mukati memavhiki mashoma semhedzisiro yekubuda kwe coronavirus. Iko kunhuhwirira sekuronga?
Ndinozviziva. Iwe uchafunga kuti isu vedu vanodiwa veDutch vashumiri uye vedu vanogara vakafara Mark Rutte havangamboshandira pane rakadaro nefarious chirongwa. Zvakanaka saka ini ndinobvunza iwe: Ndingaite sei kuti nditaure nezve tenzi's script inokwikwidza kutonga kwehutongi hwakadai? Ndakaita sei kufanotaura kwakarurama?
Isu tinozivawo rima kumeso kwechikominisi. Isu tinoziva izvi kubva kune yekare Soviet Union, iyo GDR, China neNorth Korea. Wakanga uchiziva here kuti ikozvinouri kuona iyo imwechete rima kumeso panguva yekubuda kweichi coronavirus? Isu tinoona coup yeuto pane vanhu vari mune dzinoverengeka nyika dzeEurope uye US. Isu takaiswa muvharo rakakwana. Kwete ikozvino muNetherlands, nekuti Netherlands neUK zvinofanirwa kuratidza kuti maitiro avo haasi kushanda nemazvo. Mukuita, izvi zvinogona kureva kuti kuvharika muNetherlands neUK kuchauya uye kuchanyanya kuoma kupfuura kuFrance neSpain. Tiri kuenda kuona rakasviba kumeso kwecommunism uye iri kutengeswa kwauri sechinhu chakakosha nekuti wave kutenda mukubuda kwehutachiona.
Ini ndinotsanangura hutachiona chaihwo mubhuku rangu. 'hutachiona hwakakura hunotichengeta muchokwadi chenhema". Ndakafungidzira zvekare mubhuku irori kuti kuchave neimwe denda. Hutachiona chaihwo ndihwo hunyengeri hwevanhu vazhinji kuburikidza nevezvematongerwo enyika nezvematongerwo enyika.
Matanho api atinotora mukufungidzira kwangu:
Mutoro wekutevera "nzira nemirairo" (tevera madhiri)
Kukurukurirana espionage (yeako "chengetedzo" yako pachako, uchifungidzira kwekutsvaga vanhu vane hutachiona kana vanhu vasingachengete mirairo)
Kuperevedza kwemari uye mutsetse pamakanzuru ehurumende ayo 'anopa rutsigiro'
Kurambidza kushandiswa kwemari uye mari michina iyo isingapi mari
Chisungirwa pamusha pekugara
Kumanikidzwa kuuya kwekugadziriswa kwekunze kana kusungwa kwevasingaenderi (vanhu vasingateerere ku "mafambiro" kana vasina chikonzero chakanaka chekuva mumugwagwa)
Kubata vanhu vanobva kwakakura kuongororwa data kunoratidza kuti vanogona kupanduka
Inodiwa hutano bvunzo
Inosungirwa App yekutarisa iwe uri kure
In ichi chinyorwa Ini ndakatsanangura ruzivo rwemashure uye mhedzisiro yemaitiro akadaro. Unoona here zvimwe zvinhu zvatinoziva kubva kuCommunist zvekare, iyo GDR, North Korea neChina? Panguva ino rinongova pfupa rimwe rakaipisisa. Ini ndinodaidza kuti "tekinoroji komunizimu." Icho chikominism umo tekinoroji inoita basa rakakosha uye zvese zvinokwanisa kutariswa kubva pakati pemaseva ehurumende. Ndozvatinoziva isu kubva kuChina uye izvo zvava kutoiswa muEurope neUS kuburikidza ne coronavirus hype.
Chii chinoitika kana ukasashandira pamwe? Ipapo iwe uchave wakakiyiwa pamusoro uye zvinongomanikidzwa pauri. Mitemo yose yakaiswa mumakore achangobva kupfuura aya kuita kuti "kuchengetedza" uku kuvepo. Iyo yekumanikidza yekuchengetedza hutano hwepfungwa chiitiko yakaitwa muna 1 Ndira 2020. Ndakayambira nezve izvi kwemakore uye ndakatogadzira chikumbiro chakasainwa kanopfuura zviuru zvishanu. Hapana zvazvakabatsira. Pasi pekambani yazvino yeRutte, mutemo waingomhanyiswa kuburikidza.
Chii chauchiri kuita? Zviri nani here kuzvirega zvichipfuura iwe uchingoita chete uye wobva wangorarama muhutongi hwehukama hwemubatanidzwa, uchivimba kuti zvinhu zvichawedzera kuita manyama amire nerongo? Chekupedzisira, isu tinoda kuti zvese zvigadzirwe isu. Chekupedzisira, isu tinodawo kuve nemari yekutanga. Zvakanakawo kuti usashanda kwemavhiki anotevera.
Nhoroondo yakadzidzisa kuti hutongi hunotungamira hunotungamira mukudzvinyirirwa kwakazara. Saka mubvunzo ndewekuti iwe unosarudza nyore uye ndokukotama kwenguva pfupi kana kuti unofunga nezvekureba-mhedzisiro.
Mubhuku rangu ndinotsanangura chaizvo icho chinonzi 'master script'. Iyo 'master script' yakafanotaurwa kare uye zvese zvinobuda. Ini ndichakuratidzawo sarudzo dzakakosha dzaunofanirwa kuita (iwo matipi anoshanda). Chisarudzo chakakosha kwazvo chinogona kuitwa chete kana iwe ukaona kuburikidza nemutambo wese kubva A kusvika kuZ. Ini handigoni kuisa icho mune 1 chinyorwa, asi chiise mumapeji 134. Nenguva isipi zvakare shanduro yeChirungu. Tora zvako ugoziva izvo zvakamirira iwe. Rangu bhuku rinopera nenhau dzakanaka uye yakakosha inoshanda tipi yakambobvira, asi kuzvipfupisa mumutsara mumwe chingave chinhu Saka iwe uchazowana chete chaiwo ezvazvinobatsira mazano mubhuku. Unogona kuiverenga muzuva 1. Ipfupi asi inotapira. Verenga apa
Nekutenga kwebhuku rako iwe unotsigirawo basa rangu kuti ndienderere mberi. Ndinoda zvakare kudaidza kwauri kuti uve nhengo, nekuti rutsigiro rwako harugumi uye rwakakosha kwazvo. Izvo zvakakoshawo kuti iwe ugovane zvinyorwa, kuitira kuti tisvike kune yakaoma misa. Iwe unogona kunge uri chikamu chekuratidzira mhedzisiro yeiyi anti-hysterics hutachiona. Une simba pakubata kwe bhatani.
Hurukuro neMutungamiri Gurukota Mark Rutte Coronavirus: "Izvo zvese zvakakomba, asi Baba vanokuchengeta"
Corona hutachiona, iyo pfupi yakapfupika yakananga kubviswa kwemari uye kukanganisa kwehupfumi pasi rese
Bold kufanotaura: manyepa enhema anomuka nokuda kwemari
Nhaurirano yemagariro evanhu: chishandiso chekugamuchira iyo coronavirus quarantine matanho ehurumende?
Tags: madhiri, mari, communism, mari, coronavirus, Covid-19, kurwara, Featured, raha, mirairo, capitalism, lockdown, zviyero, maka, hurumende, praktische, Rutte, mamiriro, kutsigira, support packages, te, mazano, Wat
18 March 2020 pa 14: 19
Chii chaizivikanwa naWillem Alexander?
Mambo wake Wehumambo Willem-Alexander anovhura kuratidzira 'KUTSANGANYA!' Musi weChitatu mangwanani, Kubvumbi. paRijksmuseum Boerhaave muLeiden. Chiratidziro ichi chiri pamusoro pekubuda kwehosha dzinotapukira dzakadai sedenda uye nthomba uye nemabatiro avangaita kukanganisa hupenyu.
18 March 2020 pa 15: 32
Uye saka zvinoenda kune vana .. utongi hwehutongi hwevadiki.
Tevedza rairo: Befehl ist befehl!
Iyo 'Covid-19 purogiramu yevadzidzi':
Harry chando akanyora kuti:
19 March 2020 pa 17: 14
Pfungwa 1) Kutanga kudya kwemangwanani, wozogeza uye wozobvisa pajamas, zvinogona kunge zviri izvo kuti pwere yakashambidzwa kwazvo nevabereki vavo vachanyatsoita izvi.
18 March 2020 pa 19: 27
Iye zvino dzava kuma19.00 pm uye unogona kunzwa mabhero echechi achirira. Machechi achiripo uye achiri kuvhurika panguva ino here? Panguva ino? Icho chinangwa chekuita kuti vanhu vatye fashoni, vachengetedze? Ini ndichatora puru, kubuda kunze kwemusuwo uye kutaura kuvanhukadzi vaviri uye vanotaura kuti kwemavhiki mashoma, vhiki imwe neimwe, mabhero acharira nekuda kweiyo corona hutachiona !!!
Ivo vanoenda kure chaizvo ne yavo psyop trance hypnosis.Vanogona vangangozvitenda mazviri.
Ikozvino kana kumbobvira kwaita "Illuminati". Mira izvozvi nditi kune "illuminati" ita zvakajairwa.
Vanhu hazvisi zvechokwadi zvinoitika.
18 March 2020 pa 19: 51
18 March 2020 pa 20: 04
Vanhu vano cherekedza nhaurwa dzezvemagariro sevanhu vanoita basa repamba panzvimbo yehurumende. Ipapo iwe unowana software yekutaura zvinhu zvisina kunaka nezvake uye kudzivirira mamiriro ehurumende pese panowanikwa zita Martin Vrijland. Zvirokwazvo iwe unowana dzidzo diki kune izvozvo. Zvingave zvakadaro here? Kana kuti hazvishande nenzira iyoyo? Kwete? Ndomumwe kusangana kweupombwe ... yuck
18 March 2020 pa 21: 17
Vanamai nevarume) zvakanaka haufanirwe kutaura izvozvo zvakare .. .. nekuda kujekesa! Izvi hazvisi kuitirwa. Ini ndinodzokorora izvi HERE zvakaitwa. Izvo hazvigone kuitwa pamusoro, nekuti vafundisi havaiti
18 March 2020 pa 21: 27
Zvinonakidza kuti semupurisa haufanirwe kupfeka mask yemaziso. Ivo vari kupesana nehutachiona here kana kuti vanoziva kuti kutyisidzira kwehutachiona hakupenzi?
18 March 2020 pa 22: 01
NOS nhau nhasi .. "masupamaketi anoda kurambidza kubhadhara mari" oh murume zviri pachena kuti ndeipi script iri kubuda ..
18 March 2020 pa 23: 50
Ingomirira sarudzo nyowani uye uvhote for the opposite party ha ha
Kanganwa izvozvo, hapana chinopesana neicho kunyatsovhota icho chakabatanidzwa muhurongwa.
Chikwata chinopesana chakabvunzana kwenguva yakareba naJohan Cruiyff kuti mutambo wakafamba sei / uchaenda sei wakamira, wakanaka foeballuher iye 😉 Johan 😉 aiziva uye anogona saka achiti: "iwe unozviona chete kana iwe uchinge wakuziva"
18 March 2020 pa 23: 53
Iwo mutambo wakakundwa nehukuru Cruyff, Ehe !!!
Mhosva, vanhu vakanaka ava Rutte uye Cruyff, vatambi vepamusoro
marloes akanyora kuti:
19 March 2020 pa 20: 30
Tingaite sei iwe uve mukuru? Makwai mazhinji munyika….
19 March 2020 pa 00: 25
Nguva yekuenda kunoona vanhu:
19 March 2020 pa 00: 30
Mapurisa ari kugadzirira mamiriro ekuti muNetherlands anosarudzwa kuvharirwa zvakakwana, mamiriro ezvinhu munharaunda yese akavharirwa uye vanhu vanofanirwa kugara pamba. Mumamiriro ezvinhu akadaro, mapurisa anofanirwa kumanikidza mutemo wechimbichimbi uye, kana zvichidikanwa, "ratidza ruoko rwakasimba."
19 March 2020 pa 08: 34
Kana ndikanyatsonzwisisa, vanhu makumi mashanu nevashanu vafa, vazhinji vacho vaive vakura uye vatorwara kare. Uye nekuda kweichi chiverengero chakaderera, nzanga inotya uye inomutswa.
Vanhu vanomuka. Vashandi veHurumende vanofunga usati watevera mirairo yemukuru wako. Bvunza mibvunzo uye wotsoropodza mukuru wako pamwe nevako vaunoshanda navo.
19 March 2020 pa 17: 19
Uye tarisa pane izvi kuti zviitike, nekuti iwe unogona kumirira kuvhunduka kana zvichinzi zviuru zviviri zvematare zviwedzerwe pazuva. Ipapo kutya mune midhiya nezvimwewo kwakatapurwa pane vanhu zvekuti munhu wese anotya. Uye ipapo kukiya muNetherlands kunounzwa kagumi kwakasimba sekuita zvazviri muSpain neFrance. Ipapo iwe unogona kungowana mamiriro ezvinhu apo vanhu vanoedza kutiza kubva kuNetherlands kuenda kuNorth Korea.
19 March 2020 pa 10: 51
Ikkedusik akanyora kuti:
20 March 2020 pa 00: 46
Martin uri gamba. Murume ane ruzivo rwakawanda. Nehurombo, kuchine mamwe makwai mazhinji. Vanhu vanotenda venhau nenzira yeupofu. Izvi zvichapera kubva kune inonzi "makuva". Ndiri kutya kuti pfungwa yako ichaitika. Hatingangoregi izvi zvichiitika mukomana here? Kuvhara kunodiwa. Handifunge nezvazvo !!!!! Bhuku rako riri munzira. Ini handigoni kumirira kuti ndiverenge. Tora izvozvi uye zvishoma zvishoma zvekunzwa kwematumbu kubva (kubva kune izvo zvinonzi corona zvichiitika)
« Gurukota Bijleveld mauto agadzirira ne “nzvimbo dzakasungwa” dzakawedzerwa uye kuchengetedza runyararo munjodzi yekorona, kugadzirisa: rutsigiro rwepuru makumi emamirioni.
Kukwirisa Insights muCoronavirus Panic naDr. Wolfgang Wodarg? »
Total Visits: 1.487.868
David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba?
Musangano wevatori venhau Mark Rutte naHugo de Jonge: iyo imwe nehafu yemamita nzanga uye kusimudzirwa kwemapurogiramu
Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps
Iko kufunga kukuru: Ndeipi nyika yatichavaka mushure medambudziko re corona?
Coronavirus covid-19 uye sainzi: Inopinda sei mumuviri wako uye unoitamisa sei?
Martin Vrijland op David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba?
guppy op David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba?
Riffian op Musangano wevatori venhau Mark Rutte naHugo de Jonge: iyo imwe nehafu yemamita nzanga uye kusimudzirwa kwemapurogiramu
Harry chando op David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba?
Raira bhuku rehutachiona rakazara izvozvi: